kml - Iphepha 2 - iGeofumadas
UGoogle wongeze umxholo omtsha we-3D ukujonga kuGoogle Earth nakwiGoogle Maps. Kwizixeko ezili-18 ezihlaziyiweyo, ezili-13 ziseUnited States; phantse zonke entshona kunye nezi-7 zazo eCarlifonia: ISixeko saseFoster iPalo Alto Redwood City Riverside eSan Diego Santa Cruz Sunnyvale Ezinye izixeko zezi: Honolulu, (Hawaii) Las Vegas ...
I-Kmzmaps yinkampani ezinikele ekuphuhliseni iimveliso zekhathuni kangangexesha elithile, uqhelaniso olunike umsebenzi wayo luyamangalisa xa ivelisa iimephu ezinokujongwa kuGoogle Earth ngesibheno esinomtsalane esinokunika ixabiso ekusetyenzisweni Google Earth kwiiklasi zeJografi ...
Okokugqibela ndibona isicelo esinomtsalane ngokwenyani se-iPad ejolise ekubanjweni kwedatha ye-GIS ebaleni. Isixhobo sinokubakho kwizinto ezininzi, kwaye sishiya izicelo endizizamile ezinje ngeGaiaGPS, GIS4Mobile, ArcGIS ye-iPad kunye ne-GISRoam kwi-diapers; amandla okugqibela kodwa angenabuhlobo kakhulu ekusebenzeni nawo kwaye egxile kuhlalutyo ...
Kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo bendithetha ngendlela yokuvula ifayile ye-kml kwiiMephu zikaGoogle, ndisazi indlela yayo apho ibanjwe khona. Ngoku masibone ukuba kuyakwenzeka ntoni ukuba sifuna ukubonisa ezininzi ngaxeshanye. 1. Indlela ye-kml Kule meko, ndiza kuyenza ngokubonisa ulwazi oluvela kwiZiko loLwazi lweeDolophu zoMmandla (i-CIUR) njengomzekelo, ngendlela ...
Sitchmaps / Global Mapper, guqula imifanekiso ibe yi-ecw okanye i-kmz
Kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo bendithetha nge-georeferencing yemifanekiso ekhutshelwe kuGoogle Earth, ndisebenzisa i-kml njengesalathiso ngexesha lokuzolula. Ukuvavanywa kwe-Global Mapper ndiyaqonda ukuba eli nyathelo linokuthintelwa ukuba sikhuphela ifayile yokulinganisa xa ukhuphela umfanekiso, ngeso sihlandlo inokusetyenziselwa ukuguqula ...
I-Zonum Solutions yindawo enikezela ngezixhobo eziphuhliswe ngumfundi kwiYunivesithi yaseArizona, othe ngexesha lakhe lokuphumla wazinikezela kwizihloko zekhowudi ezinxulumene nezixhobo zeCAD, imephu kunye nobunjineli, ngakumbi ngeefayile ze-kml. Mhlawumbi into ethandwayo kukuba babenikezelwa simahla, kwaye nangona ...
I-Stitchmaps yayisesinye sezona zicelo zibalaseleyo zenziwe ukwenza ii-orthophotos ezivela kwi-mosaic ezithathwe kwiGoogle Earth, ukuba isebenza njani bendithetha ngayo kudala. Abo bethu abenze le nkqubo ngaphambili, ngeenyawo, bekhuphela iifoto ezivela kuGoogle emva koko bazidibanisa nePhotoShop okanye iBentley Descartes, siyazi ukuba iStitchmaps yenza okungaphezulu kunoko. ...
Ndikhuphele isicelo se-Ipad esindishiye ngaphezulu kokuoneliseka, kwimfuno ebendifanele ukuyenza yokulandela umkhondo ngegps kwaye emva koko ndiyijonge kwi-Intanethi okanye kuGoogle Earth. Le yiGaia GPS, isicelo esibiza kuphela malunga needola ezili-12 kodwa sisebenza ...
Sonke sifuna ukwazi umzuzu xa indawo yomdla wethu ifumana uhlaziyo olutsha kuGoogle Earth. Ukwazi uhlaziyo olwenziwa nguGoogle kwisiseko somfanekiso sinzima, indlela elumkisa ngayo kwiLatLong inomdla kakhulu, kwaye nangona mva nje ipapasha iifayile ze-kml ngeejiyometri ze ...
Umcimbi wobalo lwabantu uza kuba kwifashoni kulo nyaka- kunye nale ilandelayo- kuba akukho nto ingako inokwenziwa ukulungisa izisombululo kwihlabathi liphela. Ukugxila kulo nyaka kwi-National Geographics ngokuchanekileyo kubemi behlabathi ngobusuku bokuhlengahlengisa ukuya kwi-7 yezigidigidi. Imagazini kaJanuwari yingqokelela yomqokeleli. I…
Ezona zilungileyo zinokushiyeka kwezi ziganeko yimiboniso ye-PDF eluncedo kakhulu ekubhekisweni kuyo kwinkqubo yoqeqesho okanye yokwenza izigqibo; ngakumbi kula maxesha apho umthombo ovulekileyo wehlabathi we-geospatial ukhule ngendlela emangalisayo. Nguwo umzekelo olungileyo wobuchule bokuyila, ohlaziya kwaye ...
Masicinge ukuba kufuneka sithumele umthengi imephu ebonisa indlela abaza kujonga ngayo kwi-Intanethi okanye kwi-GPS yabo. Umzekelo, iyelenqe esinalo lokuthengisa, kunye nendlela eya apho kunye nezalathiso zendlela. Omnye umzekelo inokuba yindawo yokubonwa kwesathelayithi ye-MODIS ngaloo mini, ethi ...
Kwezona zonxibelelwano zilungileyo ndizifumene njengengxelo evela kuGabriel, osuka eArgentina wasixelela kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo. Le yi-Babel ye-GPS, isixhobo sokusebenzisa simahla phantsi kwelayisensi ye-GPL, eqhuba kwiWindows, iLinux kunye neMac. Ilungele ukukhuphela idatha kwikhompyuter enye kwaye ulayishe ngqo kwenye. Umzekelo,…
Geospatial - GIS, GPS / Izixhobo, Topography
Ikhasi langaphambili Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 ... Page 6 kwiphepha elilandelayo